Liverpool oo aad ugu dhow inay la wareegto laacibka ay mudada dheer ku raad joogeen kooxaha Arsenal & Man United ee Niclas Pepe – Gool FM
Liverpool oo aad ugu dhow inay la wareegto laacibka ay mudada dheer ku raad joogeen kooxaha Arsenal & Man United ee Niclas Pepe
Haaruun June 6, 2019
(Liverpool) 06 Juunyo 2019. Sida ay daabacday Jariiradda L’Equipe kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa qarka u saaray inay adduun dhan 70 milyan oo gini kula soo wareegto laacibka ay mudada dheer ku raad joogeen kooxaha Arsenal iyo Manchester United ee Niclas Pepe.
Laacibkan oo garabka uga ciyaara kooxda reer France ee Lille oo 24-sano jir ah ayaa si xoog leh loola xiriirinayey muddooyinkii dhowaa inuu u dhaqaaqi doono midkood labada kooxood ee Arsenal iyo Manchester United, balse hadda sida la warinayo waxaa ku dhow kooxda Reds.
Xiisaha ay Niclas Pepe u hayaan inta badan kooxaha waa weyn ee qaaradda Yurub ayaa yimid kaddib markii uu 22 gool dhaliyey isla markaana caawiyey 11 gool oo kale, isagoo kooxdiisa Lille ku hoggaamiyey kaalinta labaad ee horyaalka Faransiiska.
Waxaa la xaqiijiyey inuu xagaagan isaga tagi doono kooxda Lille, waxaana la warinayaa inuu aad ugu dhow yahay inuu u dhaqaaqo garonka Anfield, maadaama ay kooxda Liverpool miiska saartay lacagaha ay kooxda reer France ku doonayso laacibkan.
Waxaa doonayay kooxaha Arsenal iyo Manchester United kuwaasoo raadinaya inay dib ugu soo laabtaan afarta sare ee Premier League, balse waxa ay haatan u muuqataa inuu helay koox wayn oo ku guuleysatay Champions League waana Liverpool.
Kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale xiiseynaysa adeegga laacibkan, waxaana ay ka gudbiyeen dalab dhan 60 milyan oo gini, laakiin waxa ay u muuqataa in laga soo diidi doono maadaama ay Liverpool miiska saartay 70 milyan oo gini.
Final-ka Champions League oo dib loo ciyaari doono kaddib markii kooxdii guuleysatay loo sheegay inay koobka soo celiso
Jurgen Klopp oo laga saarayo gurigii uu ka degganaa Magaalada Liverpool, maalmo yar kaddib markii uu ku guuleystay Champions League